Amanqaku Ufakelo for steel stainless pump multistage centrifugal
Le Notes yokufaka Stainless Multistage Centrifugal Pump: 1. Ukususela insimbi multistage centrifugal technology ufakelo pump, umbhobho ofunxayo kufuna imeko engqongqo itywina, akakwazi ukuba kombhobho ukuvuza okanye ukuvuza, kungenjalo uya kutshabalalisa isidanga ongenawo kwi i amanzi ...
Zeziphi centrifugal pump test ndlela?
Ngokuqhelekileyo, The Centrifugal Pump Uvavanyo Bandakanya Uhlobo Test kunye Factory Uvavanyo: Le Impompo centrifugal uvavanyo ─ uhlobo Uhlobo uvavanyo uvavanyo kuquka: ukuqhuba uvavanyo, uvavanyo lwentsebenzo zovavanyo captivation nengxolo test ukungcangcazela, njl A: Uvavanyo ukubaleka Xa ibaleka uvavanyo, kufuneka uhlole iqondo lobushushu ukwanda pump ...
yesondlo kwimpompo Centrifugal yohlulwe eziziiprayimari neziziisekondari, kunye nomxholo ethile ziya kufakwa?
yesondlo kwimpompo Centrifugal yohlulwe eziziiprayimari neziziisekondari, kunye nomxholo ethile ziya kufakwa? Centrifugal impompo level 1 Ulondolozo imixholo ngolu hlobo lulandelayo: 1) khangela ukuqinisekisa ukuba nokupakisha ayikho elifutshane, nobubovu cala, akukho kukuwohloka ukuvuza nto yomqala super; 2) ukuhlola enoba kukho ...
Isilumkiso! Iimpompo le meko zilandelayo kufuneka ayeke ngoko nangoko!
"Ukuba ufumana naziphi na ngongoma zilandelayo kufuneka ayeke impompo" (1) I-Impompo na ukuvuza kwamanzi; (2) Xa isithuthi of mpompo uyatshaya okanye ihambele ndawo; (3) Pump esinengqondo engaqhelekanga; (4) Xa ubushushu obuvelisa liphuma-up ngokukhawuleza kakhulu okanye uyatshaya; (5) Xa impompo babe lokungcangcazela esinxilisayo;